Janaayo | 2010 | WEEJIDOW
Archive for Janaayo, 2010
War Deg Deg ah: Madaafiic sababtay Dhimasho iyo dhaawac oo gabaldhicii maanta lagu garaacay xaafado katirsan degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir
Janaayo 31, 2010
Duqeymo aad u culus ayaa Maqribnimadii Caawa waxaa loo geystay xaafado katirsan degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir iyadoona duqeyntaasi ay sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah.
Madaafiicdan oo aad u xooganaa ayaa mar kaliya gabaldhicii maanta waxaa lagu garaacay xaafadaha Buulo bareey, Ceelturcaaye iyo xaafada Godey oo dhamaantood katirsan xaafadaha hoostaga degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir.
Madaafiicdan ayaa waxaa la sheegay in tiro ahaan ay gaarayeen ku dhawaad 20-Madfac waxaana dhamaantood ay ku dhaceen xaafadaha kala duwan ee Suuqa Xoolaha, iyadoo la sheegay in ay ku dhaceen goobo ay degenaayeen dad rayid ah.
Duqeenyta oo laga tuurayey xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya sida dad ay sheegayaan ayaa waxa ku dhintay in ka badan 5 ruux iyado ay ku dhawacmeen 10 ruux oo kale kuwaasi oo ay madaafiicda kula dhacday deegaanka Suuqa Xoolaha ee magaalada Muqdisho.
Dadka madaaficda ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa waxa ku jira caruur iyo haween qoys ka soo wada jeeda kuwaasi oo ay madaaficda duqeenta ah ku habsatay, waxana la sheegayaa in dadka xaafadaha Suuqa Xoolaha cabi ay soo wajahday madaama madaafiicda caawa ay ahaayd mid si toos ah ugu hoobaneeysay xafadahaasi, waxaana la sheegaya in qasaarah intaasi uu ka badan karo.
War Deg Deg ah:Guddoomiyaha Ururka SSCO oo xalay lagu toogtay Bartamaha Boosaaso
Kooxo hubaysan ayaa xalay fiidnimadii ku toogtay magaalada Bosaaso C/Laahi Mahadi Sayidka oo Madax ka ahaa ururka isku xirka ardayda Somaaliyeed ee Puntland (SSCO).
Dad Goob joogayaal ah ayaa sheegay in Marxuumka xabadaha looga dhuftay Madaxa iyo feeraha ,taasi oo sababtay in uu ku geeriyoodo isla goobta lagu toogtay.
Goobtu uu dilku ka dhacay waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa degmada ,waxaana goobta ka baxsaday dadkii gaystay falkaasi dilka ah.
Marxuumka la dilay ayaa ka hor inta uusan dhiman waxa uu shir madaxtooyada ka dhacay ka sheegay in dhowr loogu hanjabay dil,taasi oo xalay dhab noqotay.
Ardayda wax ka barata jaamacadaha Puntland ayaa canbeerayay dilka loo gaystay C/Laahi Sayidka ,waxayna Maamulka ku canaanbteen amaan darida ka jirta meelo ka mid ah Puntland.
Taliye ku xigeenka Ciidanka Boliska oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in baaritaano lagu wado habkii uu dilka u dhacay ,isagoo xusay in maxkamada la soo taagi doono cidii ka danbaysay dilka godoomiyaha.
Dilka loo gaystay C/laahi Mahdi Sayidka ayaa cabsi balaaran ku abuurtay dhalinyarada wax ka barata meelo ka mid ah Puntland ,waxaana iminka muuqata in amaanka magaalada Bosaaso uu sidii hore ka sii xumaaday.
War Deg Deg ah: Dagaalo xalay iyo Saaakay Siyaabo kala duwan uga dhacay degmooyinka Baladxaawo iyo Afmadow ee gobolada Gedo iyo J/hoose.
Dagaalo geystay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay iyo Saaakay waxa ay Siyaabo kala duwan uga dhaceen degmooyinka Baladxaawo iyo Afmadow ee gobolada Gedo iyo J/hoose.
Dagaaladan oo xalay iyo saakay siyaabo kala duwan uga dhacay degmooyinka Baladxaawo iyo Afmadow oo ka kalatirsan gobolada Gedo iyo J/hoose ayaa ahaa kuwo u dhaxeeyay Maamulada Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ee degmooyinkaasi iyo kooxo hubaysan oo weerar ku soo qaaday sida la sheegay.
Abaaro Saacado marka ay aheyd 2-habeenimo ee saqdii dhexe ee xalay ayaa Ciidamao katirsan Culumaa’udiinka Ahlu Suna Waljamaaca waxa ay weerar ku qaadeen sida la sheegay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi xalay ka dhacay degmada Baladxaawo uu ku dhintay 1-qof oo rayid ah halka qof kalana uu ku dhaawacmay sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah, waxaana xalay laga maqlayay magaalada Baladxaawo dhawaqa rasaasta culus iyo mida fudud oo ay isweydaarsanayeen dhinacyadii dagaalamay.
Sheekh C/raxmaan Anzari oo sheegtay in uu yahay gudoomiyaha Maamulka Culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca oo Waajidpress la soo xiriiray ayaa sheegay in weerar ay ka soo qaadeen degmada Dolow ee gobolka Gedo islamarkaana ay mudo kooban la wareegeen gacan ku haynta Saldhiga degmada Baladxaawo inkastoo uu sheegay in goor dambe ay isaga baxeen goobihii ay la wareegeen isagoona intaasi raaciyay in qasaaro culus ay gaarsiiyeen dhinacii ay la dagaalameen.
Dhinaca kale Waaberigii hore ee Saaka ayaa waxaa dagaal mudo kooban socday uu ka dhacay degmada Afmadow ee gobolka J/hoose kaasi oo u dhaxeeyay Maamulka Xarakada Mujaahdiinta Al Shabaab ee degmada Afmadow iyo kooxo hubaysan oo weerar ku soo qaaday.
Kooxda Al Shabaab ayaa galabta maamul kaga dhawaaqday deegaanka Ceel-Garas ee Gobolka Galguduud
Kooxda Al Shabaab ayaa galabta maamul kaga dhawaaqday deegaanka Ceel-Garas ee Gobolka Galguduud iyadoo ninka ugu da,da weyn Al Shabaab loogaga dhigay gudoomiye.
Ninka ugu da,da weyn Dhaq dhaqaaqa dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Shabaab ayaa loo dhiibay xilka gudoomiya tuulada Ceel-Garas kaasoo lagu magacaabo Sheekh Cali Farax Kheyre oo ah 70 jir ka mid ah aas aasayaashii Shabaabka.
Goobta xilka loogaga dhawaaqay waxaa xaadir ku ahaa gudoomiyaha Gobolka Galguduud ee Al Shabaab Sheekh Yuusuf Kaba Ku Tukade iyo madaxa siyaasada gobollada Sh Xuseyn Cali Fidow.
Hadal uu jeediyey Sheekh Xuseyn Cali Fidow oo la hadlay warbaahinta kadib xaflada ayuu ku sheegay in maanta ay xila u dhiibeen ninki ugu weynaa Al Shabaab oo uu ku sheegay in ujeedada ay ugu dhiibeyna ay tahay mudnaanta ay leedahay deegaanka Ceel-Garas.
“Sababta aan ugu dhiibnay Sheekh Kheyre halkaan ayaa waxa ay tahay Ceel-Garas oo ah meel ay kasoo jeedaan mujaahdiin badan oo dalka wax u qabtay iyo dadkaba”ayuu yiri Sh Fiidow.
Shabaabka ayaa maalmahan waday magacaabida maamulo cusub iyo isku shaandheyn ay ku sameeyeen qaar ka mid ah maamulada gobollada dalka,waxaa asbuucii hore ay u magacaabeen Gobolka Galguduud Sheekh Kaba Ku Tukade.
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa tagay magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia, halkaasi oo uu kaga qeybgalayo shirka madaxda Afrika.
Madaxweynaha iyo wafdi balaaran ayaa sii maray magaalada Nairobi ka hor inta aanay tegin magaalada Addis Ababa.
Madaxweyne Shariif Shiikh Axmed, oo shalay xusay muddo sanad ah markii xafiiska qabtay ayaa sheegay in sanadkan dowladdiisa ay diyaar u tahay inay weeraro militeri oo xoogan ay ku qaado kooxaha Islaamiyiinta ah ee ka soo horjeeda ee maamula qeybo balaaran oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya.
Isagoo ka hadlayay idaacadda dowladdu leedahay ayaa Madaxweyne Shariif waxa uu sheegay in dowladiisu ay ka guuleeysan doonto al-Shabaab iyo al-Qaeda, isla markaana ay soo celin doonto degenaanshaha Soomaaliya.
Madaxweyne Shariif waxa uu sheegay in kooxaha kacdoonka wada aanay ku dagaallameyn Islam, laakiin ay u adeegayaan wax uu ugu yeeray dano shisheeye.
Madaxweyne Shariif oo markiisa labaad ay u tahay ka qeyb galka shirweynahan ayaa shir madaxeedkii u horeeyay ee uu kaga qeyb galo Addis Ababa uu saacado gudahood ahaa Madaxweyne, markii lagu caleema saaray Jabuuti.
Sida ay sheegayaan wararka Madaxweynaha ayaa la filayaa in khudbad uu ka jeediyo shirka 33aad ee Midowga Afrika ee saacadaha soo socda ka furmaya, waxaana khudbada Madaxweynaha uu ku eegi doonaa xaaladaha ammaan iyo mida siyaasadeed ee dalka.
Madaxweyne Shariif oo shalay u dabaal dagay sanad-guuradiisa koowaad markii uu qabtay xilka Madaxweynenimada ayaa quudareynaya sidii taageero caalami ah ugu heli lahaa Dowladaha Afrika, si Dowladdiisa ay cagaheeda isku taagto.
Mudaneyaal ka tirsan Baarlamanka federalka oo madaxda sare ee dowladda Somalia ku eedeeyey in hal sano ay waxqabad la’aan ku dhameysteen
In ka badan 20 xildhibaan oo ka tirsan Baarlaamanka Somalia oo maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay Hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyey madaxda sare ee dowlada ineysan jirin wax ay qabteen mudadii halka sano aheyd ee ka soo wareegtay markii ay talada qabteen, xili dowlada ay dabaal degtay shalay sanadguuradii 1-aad ee ka soo wareegtay markii madaxweyne Shariif lagu doortay dalka Jabuuti.
Mudaneyaashan oo caro aad u badan ay ka muuqatay ayaa sheegay in xukuumada Somalia ay tahay tan ugu nasiibka wanaagsan marka loo eego xukuumadihii ka horeeyey ee C/llaahi Yuusuf iyo C/qaasim maadaama bay yiraahdeen ay taageero dhinac walba leh ka heshay beesha caalamka hase ahaatee ay noqotay tan tan ugu nasiibka daran marka loo eego waxqabad la’aanta.
“Halkii sano ee ay jirtay madaxweynaha iyo raisul wasaaraha waxay ka bixi la’yihiin safaro aan dhamaad laheyn iyo xilka qaadis, taasna waxbaad maaha, madaxweyne Shariif waxaan leeyahay saddex xaafadood oo laga taliyo dowlad laguma noqdo ee haddii aadan waxba qaban karin meesha isaga tag, RW Sharma’arke waxaan leeyahay 22-ka bishan soo socoto Baarlamanka kalsooni soo weydiiso hadii kale RW ma tihid” sidaa waxaa yiri xildhibaan Maxamed Dhaqane.
“Markii Jabuuti lagu dooranayey madaxweynaha sanad ka hor dowladu waxay joogtay meelo badan oo hadda aan gacanta ugu jirrin sida Kaaraan, Yaaqshiid, C/casiis, Shibis iyo meelo kale oo xamar ka tirsan, haddana waxay ku soo uruurtay 3 xaafadood iyo jidka Maka Al mukarama oo isaga laftiisa la isku heysto, marka halkii ay u gudbi laheyd gobolada dalka waxay awoodi la’adahay iney caasimada wax ka qabato” sidaasina waxa yiri xildhibaan Macalin Jiis oo ka mid ah xildhibaanadii ka qeyb galay kulankii ka dhacay hotelka saxafi.
Dab qasaaro geeystay oo ka kacay degmada Luuq ee Gobolka Gedo
Dab xoog leh oo qasaaro naf iyo maalba leh geeystay ayaa waxa uu ka kacay xaafad ka mid ah Degmada Luuq ee gobola Gedo, xaafadaasi oo ay degan yihiin dad danyar ah iyo barakacayaal.
Xaafada Dabka uu qabsay oo lagu magacaabo Sheekh Maxaas ayaa la sheegay in ay baabi,iy guryo farabadan oo ku yaala xaafadaasi iyadoona dabka uu ku dhintay hal ruux oo la sheegay in u ahaa cunug yar halka 2 kale ay ku dhaawacmeen dabka.
Dabka oo aan la garan wali wax yaabaha uu ka dhashay ayaa waxaa gurmada u sameeyey dadka guryaha ay ka gubteen dadka ku nool xaafadaha degmada Luuq iyo maamulka Xisbul Islaam oo gacanta ku haya degamadaasi.
Xaafada dabka uu baabi,yey ayaa la sheegay in ay deganaayeen dad dan yar ah oo guryahooda uu ka sameeysanaa carshaan iyo dad barakacaal ah oo ku noolaa xaafada uu dabka ka kacay iyadoona boqlaal dad ah oo dabka uu guryaha ka waxyeeleeyey ay haatan meelo banana ah daadsan yihiin.
Maha markii ugu horeeysay ee uu dab ka kaco dgemadaas Luuq hasa ahaatee dabkaani oo ahaa mid xoogaanaa ayaa waxa la garan wali sababaha keenay dabkaasi qasaaraha geeystay.
War Deg Deg ah: Dagaalo iyo duqeymo isbarbarsocday oo maanta mar kale ka dhacay xaafado ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir
Dagaalo iyo duqeymo hor leh oo u dhaxeeyay Ciidmada dowladda KMG Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isku dhinac ah iyo dhinacyada ka soo horjeeda ayaa maanta mar kale ka dhacay degmada Hodan ee goboka Banaadir.
Dagaalada iyo duqeymaha u dhaxeeyay dhinacyada isaga soo horjeeda magaalada Muqdisho ee maanta mar kale ka dhacay xaafado ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa xoogoodu waxa ay ka dhaceen agagaarka Isgoyska KM-4, Taleex, Digfeer iyo Tarabuunka halkaasi oo ay isku faro saareen Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa AMISOM iyo xoogaga ka soo horjeeda.
Inkastoo dhinacyada dagaalamay ay hoos isugu dhigayeen rasaasta ay isweydaarsanayeen ayaa hadana waxaa barbarsocday duqeymo culus oo ku dhacayay degmooyin ku yaala gobolka Banaadir kuwaasi oo qaarkood ku dhacayay degmooyin ay kamid yihiin Deyniile, Yaaqshiid iyo degmooyin kale oo katirsan gobolka Banaadir.
Inta la xaqiijiyay dagaalada maanta dhacay ayaa waxaa ku geeryooday inkabadan 4-ruux halka ay ku dhaawacmeen 15-kale sida uu Waajidpress u sheegay Weriye madaxbanaan oo ku sugan degmada Hodan islamarkaana lagu magacaabo Maxamed Abuukar Cabdi.
Dagaaladan ayaa waxa ay dabasocdeen dagaalo culus oo habeenimadii xalay si saf ah uga dhacay degmooyin badan oo ku yaala gobolka Banaadir kuwaasi oo u dhaxeeyay Ciidamada dowladda KMG ee Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa AMISOM iyo Xoogaga Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab iyo waliba kuwa Xisbul Islaam iyadoo dagaaladaasi oo aad u cuslaa ay xalay ku geeryoodeen in kabadan 10-ruux halka ay ku dhaawcmeen 30-kale.
Dadkii ku haray qeybo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo cabasho ka muujiyay dagaalada ka soconaya magaalada Muqdisho
Dadkii ku haray qeybo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen dagaalada ka soconaya magaalada Muqdisho.
Iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dagaalo iyo duqeymo ay ka dhacayeen qeybo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo tii ugu dambeysay ay aheyd dagaaladii iyo duqeymihii habeen hore Saqdii dhexe ilaa iyo shalay ka dhacayay qeybo badan oo katirsan magaalada Muqdisho ayaa Cabasho xoogan waxa ay ka soo yeeraysaa dadka faro ku tiriska ah ee ku haray degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ee gobolka Banaadir.
Qaar kamid ah dadkaasi oo la hadlayay Idaacada Shabelle ayaa waxa ay sheegeen in ay dhibaato xoogan ku qabaan dagaalada iyo duqeymaha ku soo laalaabtay xaafadaha ay degenyihiin ee degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag iyagoona intaasi ku daray in aysan haysan qarashaad ay uga barakacaan xaafadaha ay iminka degenyihiin islamarkaana dhibaatooyinku ay ku haystaan.
Xabiibo Aadan oo ah Hooyo dhibaataysan islamarkaana ku nool xaafad kamid ah degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa Idaacada Shabelle waxa ay u sheegtay in ay awood u laheyn in ay ka barakacdo xaafada ay haatan ku nooshahay iyadoona intaasi sii raacisay in goordhow ay ka soo laabatay duleedka magaalada Muqdisho halkaasi oo ay ku noolyihiin dadkii ka barakacay dagaalada aan dhamaadka laheyn ee wali ka sii soconaya magaalada Muqdisho.
Cabashadani ka soo yeeraysa dadka faro ku tiriska ah ee ku haray degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ayaa imaanaysa xilli Isbuucan horaantiisii ay Cabasho ay ka soo yeertay dadka faro ku tiriska ah ee ku haray degmooyinka Waqooyi ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka cabanayay dagaalada iyo duqeymaha ku soo laalaabtay xaafadaha ay degenyihiin.
War Deg Deg ah: Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay oo mudo hal sano ah u kordhiyey Ciidamada Midowga Afrika ee jooga Dalka Soomaaliya.
Janaayo 28, 2010
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa mudo hal sano ah u kordhiyey Ciidamada Midowga Afrika ee jooga Dalka Soomaaliya gar ahaana Magaalada Muqdisho.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta isku raacay islamarkaana u codeeyey in Ciidamada Midowga Afrika ee loo yaqaano AMISOM ee ku sugan Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya in sanad kale ay sii joogaan Wadanka Soomaaliya.
Waxaa ay ku baaqeen in la gaarsiiyo tirada Ciidamada AMISOM ee haatan ku sugan Magaalada Muqdisho ilaa iyo 8,000 Askari sida horay ay Midowga Afrika ay u balanqaadeen.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay oo ka kooban ilaa iyo 15-xubnood ayaa si wada jir ah ugu codeeyay in ay joogaan Ciidamadaasi ilaa 31-ka January ee sanada 2011-ka si ay gacan uga geystaan xal u helida iyo nabad ku soo dabaalida Dalka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa ay farta ku fiiqeen in lasii wado caawinta Ciidamada Dowlada KMG ee Soomaaliya islamarkaana la mideeyo Ciidamada Dowlada Soomaaliya ee loogu soo tawabaray Dalal kala duwan oo Caalamka ku yala.
Horaantii Bishan ayaa Ururka Midowga Afrika oo ka kooban ilaa iyo 53-Dal waxaa ay wakhtiga ay joogayaan Soomaliya ay u kordhiyeen Ciidamada Midowga Afrika mudo 6-Bilood ah.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Janaayo, 2010.